कहालीलाग्दो दुर्घटना ! | चितवन पोष्ट
कहालीलाग्दो दुर्घटना !
हरेक दुर्घटनाहरु दुःखदायी र अप्रिय हुन्छन् । नेपालमा दिनहुँ कहीँ न कतै दुर्घटना भएकै हुन्छन् । हरेक दुर्घटनाले शोक दिलाएर जान्छन् । कहीँकतै दुर्घटना नहून् र कसैको पनि दुर्घटनामा परी मृत्यु नहोस् भन्ने कामना गर्दागर्दै पनि आकस्मिकरुपमा दुर्घटना भइदिन्छन् । बुधबार पनि त्यस्तै भयो ताप्लेजुङको फुङलिङ तारेभीरमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटना । पूरै देशलाई स्तब्ध पार्ने गरी भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सात जनाको अकल्पनीय निधन भयो । तेह्रथुमको चुहानडाँडामा कार्यक्रम सकेर ताप्लेजुङको प्रख्यात पाथिभरामाईको दर्शन गरी फर्किने क्रममा भएको दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी, सफल पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक ध्रुव भोचिभया, सरकारका सचिव युवराज दाहाल, सुरक्षाकर्मी अर्जुन घिमिरे र पाइलट प्रभाकर केसीको ज्यान गयो । देशले एक उदीयमान युवानेतामात्रै गुमाएन, उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र सुरक्षाकर्मीसमेत गुमाउन पुग्यो । यसले देशलाई अपूरणीय क्षति पुग्नुका साथै देशवासीलाई गहिरो पीडाबोध भएको छ ।
नेपालका राजमार्गदेखि आकाससम्म असुरक्षित रहँदै आएको छ । देशको भौगोलिक अवस्था र मौसममा भइरहने फेरबदलका कारण हवाई यात्रा असुरक्षित र चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । प्राविधिकरुपमा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कमजोर छ । बुधबारको हेलिकप्टर दुर्घटनाको प्रमुख कारण खराब मौसम वा अन्य प्राविधिक कारण के थियो, त्यो सरकारको विस्तृत छानबिनबाटै जान्न सकिने विषय हो । नेपालमा यसअघि पनि ०६३ असोजमा सोही क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा तत्कालीन मन्त्री गोपाल राई, मूर्धन्य विद्वान् डा. हर्क गुरूङलगायत देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको निधन भएको थियो । बुधबार पनि प्रतिकूल मौसमका कारण पाइलटले हेलिकप्टर उडाउन इन्कार गर्दागर्दै दबाबस्वरुप उडाउन बाध्य पारिएको बताइएको छ, यसबाट खराब मौसममा सतर्कता अपनाउन नसक्दा पनि अप्रिय दुर्घटनाको नियति भोग्नुपर्ने वास्तविकता उजागर गरेको छ । हेलिकप्टरमा पाँच जनाभन्दा बढी उडान गर्न नमिल्ने मान्यता रहँदारहँदै पनि कुन बाध्यता वा परिस्थितिले सात जनाको यात्रा गराइयो ? यसमा जिम्मेवार अधिकारीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । दुर्घटनाका कारणहरुको निवारणतर्फ ध्यान नदिने हो भने यस्ता दुर्घटनाको पुनरावृत्ति भइरहने छ । र, यस्ता कहालीलाग्दा दुर्घटनालाई नियति सम्झेर देशले राष्ट्रिय शोक मनाउने, परिवारजन शोकाकुल हुने र जनताले सामाजिक सञ्जालमा भावपूर्ण श्रद्वाञ्जलीका स्टाटसहरु राखेर दुःखमनाउ गर्ने श्रृंखला चलिरहने छ ।
देशका लागि अपरिहार्य व्यक्तिहरुको निधन हुँदा पर्न जाने अपूरणीय क्षति त पूरा हुन सक्दैन । तर, हरेक दुर्घटनाबाट पाठ सिक्न सके थुप्रै दुर्घटनाहरु टार्न सकिन्छ । नेपालका हवाई सेवा जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारले नीतिगतरुपमै उडान सुरक्षाका विषयमा अध्ययन थाल्नु अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा भएका अधिकांश दुर्घटनाको कारण खराब मौसम नै हुने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । तर, प्रमुख कारण मौसमकै खराबी हो भने सामान्य सावधानी किन अपनाउन सकिँदैन ? दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने सर्वप्रथम नेपालको भौगोलिक स्थिति, हेलिकप्टर÷जहाजको प्राविधिक अवस्था, मर्मतसम्भार तथा दक्ष जनशक्तिजस्ता विविध पक्षका बारेमा सावधानी अपनाउनैपर्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरक्षित उडानका लागि कडाइका साथ उल्लेखित पक्षमा कडाइ गर्न सकेमात्र नेपालको हवाई सेवाप्रति विश्वस्त हुन सकिन्छ । नेपाली आकाश असुरक्षित हुनु देशको पर्यटनलगायत समग्र क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य हो । यस्तो आकस्मिक नियति कसैले पनि भोग्नु नपरोस् भन्नाका लागि सरकारले हरेक कोणबाट दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आगामी यात्रा सफल बनाउनेतर्फ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । कहालीलाग्दो दुर्घटनामा निधन भएका युवानेता अधिकारीलगायत दिवंगतहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !